Ungabasusa kanjani abalandeli ku-Instagram: Iyini futhi isebenza kanjani | Izindaba zamagajethi
I-Instagram iyinethiwekhi yokuxhumana nabantu eyaziwa kakhulu namuhla. Izigidi zabantu zine-akhawunti kuyo. Ikakhulukazi esimweni semikhiqizo nabashushisi, sekube ngumbukiso omuhle, ukuzikhangisa ngemikhiqizo noma ngokwakho. Ngakho-ke, abaningi bafuna indlela yokwenza thola abalandeli kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu, okuthile okungenzeka ngeziqondiso ezithile.
Kepha kungenzeka futhi ukuthi umuntu ongafuni ukumlandela ngumlandeli wakho ku-Instagram. Yini engenziwa esimweni esinjalo? Isikhathi esithile manje, uhlelo lokusebenza oludumile lube nesici esivumela abasebenzisi ukuthi basuse abalandeli. Ngakho-ke ungenza lo muntu angakulandeli.
1 Kuyini futhi ususe abalandeli ku-Instagram
2 Susa abalandeli be-Instagram
3 Kuthiwani ngabalandeli esibasusayo?
4 Ingabe inqubo ehlehliswayo?
Kuyini futhi ususe abalandeli ku-Instagram
Kunezikhathi eziningi lapho umuntu engakulandela ku-Instagram. Kepha, kungenzeka ukuthi kunjalo ufisa ukuthi umuntu angakwazi ukukulandela. Noma uma une-akhawunti yangasese, wake wavuma ukungivumela ngikulandele, kodwa manje uyazisola. Uma kunjalo, isici sokususa abalandeli sethulwe ngonyaka odlule.
Igama ngokwalo likwenza kucace ukuthi liyini. Kungumsebenzi osivumela susa abanye babalandeli bethu Ku-Instagram. Ngale ndlela, laba bantu bazoyeka ukubalwa njengabalandeli ku-akhawunti yethu. Endabeni ye-akhawunti yangasese, vimbela-ke laba bantu ukuthi bangaboni yonke into oyilayisha kwinethiwekhi yezenhlalo evela kwi-akhawunti yakho. Ngakho-ke ezimweni ezinjalo kungasiza kakhulu.
I-Instagram ikuvumela ukuthi ususe bonke abalandeli obafunayo, kwalabo abasohlwini lwethu. Akunamkhawulo kulokhu. Ngakho-ke uma kukhona umuntu oyedwa noma ngaphezulu ofuna ukuyeka ukukulandela, ungakwenza kalula. Ngaphezu kwalokho, inqubo yokuqeda abalandeli kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu ilula kakhulu ukuyenza. Ngalo mqondo, kufanele kwenziwe kusuka enguqulweni yama-Smartphones, lapho lokhu kungenzeka khona.
Susa abalandeli be-Instagram
Into yokuqala okufanele siyenze ngakho-ke ukuvula i-Instagram ku-smartphone yethu. Lapho inethiwekhi yokuxhumana nabantu ivulekile, kufanele siye kuphrofayili yethu kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Lapho, kufanele chofoza kwinani labalandeli esinabo kuphrofayili yethu. Ngale ndlela, isikrini sefoni sizokhombisa uhlu oluphelele nabantu noma ama-akhawunti asilandelayo.
Ngemuva kwalokho, kufanele sibheke lowo muntu noma abantu esingafuni ukusilandela, ohlwini oluthiwa. Uma kwenzeka unabalandeli abaningi, ungasebenzisa ngqo injini yokusesha kulesi sigaba kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Lapho sesilitholile igama lomuntu, siyakubona lokho kunamachashazi amathathu amile eceleni kwegama lakho. Ngemuva kwalokho kufanele sichofoze kula maphuzu amathathu. Imenyu encane yokuqukethwe izovela esikrinini, enokukhetha okuhlukile kuleli cala.
Le nketho ukususa lo mlandeli we-Instagram. Lokhu yilokhu esikufunayo, ngakho-ke kufanele nje sikuchofoze. Lapho senza lokhu, sizocelwa isiqinisekiso, sikwenze kucace ukuthi siqinisekile ngalokhu esikwenzayo. Kuhlala kuphela ngokuchofoza ku-Dele, ukuze lo muntu ayeke ukuba ngumlandeli wethu. Uma ufuna ukwenza ngabantu abaningi, inqubo oyenzayo iyafana kuzo zonke izimo. Ngeshwa, kuyinto eyenziwa ngasikhathi sinye. Ngakho-ke uma unabalandeli abaningi ongabasusa, inqubo ingathatha isikhathi eside impela. Kepha izinyathelo okufanele zilandelwe ziyefana, ngakho-ke zilula kakhulu.
Ungazilayisha kanjani izithombe ku-Instagram kusuka ku-PC
Kuthiwani ngabalandeli esibasusayo?
Esimweni lapho sinephrofayili yomphakathi ku-Instagram, iqiniso ukuthi isenzo esingenzi mqondo omkhulu. Njengoba lo muntu ezoqhubeka nokubona okushicilelwe kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ungaqhubeka uphawule, uthande futhi ubuke iphrofayili noma izindaba. Futhi, uma lowo muntu efisa kanjalo, bangakulandela futhi nganoma yisiphi isikhathi. Ngalo mqondo, kuphrofayili yomphakathi, uma kukhona umuntu okucasulayo, kungcono ukumvimba. Njengoba ukuvimba lowo muntu kusho ukuthi ngeke akwazi ukubona noma yiziphi izincwadi zakho, noma axhumane nawe.
Okwalabo basebenzisi abanephrofayili eyimfihlo ku-Instagram, khona-ke kuyinto ethakazelisa kakhulu. Njengoba uma kukhona umuntu ongafuni ukukulandela, ukuthola ngale ndlela. Ngokuyisusa kubalandeli bakho, lo muntu ngeke akwazi ukubona okushicilelwe, noma izindaba kuphrofayela yakho kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu. Lokhu yikho kanye obekufunwa, ngakho-ke ngalowo mqondo kusebenza kahle kakhulu.
Yize lo muntu engasithumela umyalezo wangasese, uma kungenzeka sisebenzise le nketho. Kanjalo Ungacela ukusilandela futhi kunethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ngakho-ke lokhu akusho ngokuphelele ukuthi siyamsusa lo muntu. Yize sithatha isinqumo sokuthi ngubani osilandelayo nokuthi ngubani ongalandeli ku-Instagram. Kepha, uma kusikhathaza ngempela, kufanele sisebenzise inketho yebhlokhi. Uma nje ungafuni ukuthi abone okuthunyelwe kwakho, ungamsusa njalo kubalandeli bakho.
Ingabe inqubo ehlehliswayo?
Uma ususe umlandeli ku-akhawunti yakho ye-Instagram, lowo muntu ususwa njengomlandeli, akunakwenzeka ukuhlehlisa inqubo. Lokhu kuyinto enganikeli ngamathuba amaningi. Yize kunjalo, yilowo muntu okufanele athathe isinyathelo kulokhu, uma ufuna bakulandele futhi ku-akhawunti yakho.
Ngakho-ke, uma ususa umlandeli ngephutha, uthe umuntu kuzofanele alandele i-akhawunti yakho futhi. Ukuze inqubo ngandlela thile "iguqulwe." Kepha kuyinto okufanele yenziwe ngumsebenzisi okukhulunywa ngaye. Endabeni ye-akhawunti yangasese, lowo muntu kuzofanele athumele isicelo futhi ukuze akwazi ukulandela iphrofayili yakho ku-Instagram. Isicelo okuzodingeka usamukele, ukuze ngiphinde ngibone ukushicilelwa kwakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Amanethiwekhi omphakathi » Ungabasusa kanjani abalandeli ku-Instagram
Sihlaziya i-Acer Travelmate X5 entsha, osebenza kakhulu naye